I-Cotswold Cottage Emangalisa e-Snowshill, e-Broughwood Cottage - I-Airbnb
I-Cotswold Cottage Emangalisa e-Snowshill, e-Broughwood Cottage
Snowshill, England, i-United Kingdom
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-David
I-Stunning Cotswold Cottage edolobhaneni elihle lase-Snowshill. I-Broughwood Cottage
I-Broughwood Cottage ingumbhede obukekayo ongu-3, izindlu zokugezela ezi-2 ze-cotswold zamatshe emagqumeni angaphansi kwe-The Cotswolds endaweni emangalisayo yebhokisi likashokoledi ebizwa ngokuthi i-Snowshill. Njengoba idolobhana le-Broadway liqhele ngamamayela angu-2, i-Snowshill ihlelwe kahle namagquma aseCotswold akhuphuka ngokunyuka azungeze idolobhana ezinhlangothini ezintathu. Yaziwa ngobuhle bayo obungaguquki obungavamile kanye nokubukwa kweSevern Vale ngasentshonalanga. Umgwaqo wakudala obizwa ngokuthi u-Buckle Street unqamula isifunda kanye ne-Snowshill Manor, ephethwe yi-National Trust, iyisakhiwo esihle e-Snowshill esinezingadi ezinhle.
Lesi sakhiwo sakhiwa ngeminyaka yawo-1700 futhi sitholakala kalula yi-Cotswold Country Pub, The Snowshill Arms. Sikumamayela angu-2 kuphela ukusuka esigodini sase-Broadway lapho kunezitolo eziningi ezinhle, amathilomu, izindawo zokudlela kanye nezindawo zobumnandi.
Indlela yokuhamba edumile ye-cotswold idlula ngqo emnyango wethu wangaphambili. Kukhona ezinye izindlela eziningi zokuhamba ezimangalisayo ezitholakala kalula emnyango wethu.
Ngokubuka ngqo phezu kwesonto elidala kusuka kuwo wonke amafasitela angaphambili kanye namagquma agingqikayo e-The Cotswolds kuya ngemuva, isilungiselelo esihle kakhulu sokuzwa impilo enhle yaseCotswold.
Le ndawo isanda kulungiswa kabusha ngokuphelele. Ukuhlobisa kanye nesitayela sangaphakathi kubonwe ngumklami wangaphakathi okhethekile ovela endaweni ozokushiya nesipiliyoni esiphelele se-Cotswold.
Sisanda kufaka yonke i-AGA kagesi ethuthukisa kuphela isipiliyoni sekotishi laseCotswold eBroughwood. I-AGA ER3 90 iza nazo zonke izici ezilandelayo.
2 Ohhavini kanye nohhavini ofudumele
Ukupheka ukushisa okukhazimulayo kugcina ubuhle bemvelo bokudla kanye nokunambitheka
I-hotplate yezinto ezintathu
Izikhathi zokushisa ngokushesha
Ihhavini lishisa yonke indawo phansi
SICELA UQAPHELE: I-AGA ihlala ishisa kakhulu isikhathi eside futhi zonke izingane kufanele zigadwe ngaso sonke isikhathi ekhishini. Ayifanele izingane ezisacathula.
Sihlala sishiya ibhodlela lewayini, ikhekhe, ubisi, ikhofi, itiye namasaka kashukela kanye nama-pods ekhofi omshini wekhofi. Sibeka ukukhethwa kokuqala kwezingodo kanye nokubasa ukuze wenze umlilo uqhubeke. Kukhona i-wifi enhle emagcekeni.
Sinendawo yokupaka izimoto yamahhala ngemuva kwendawo kanye nezindawo eziningi zokupaka ngqo emgwaqeni ongaphandle.
Sicela uqaphele ukuthi kuzodingeka unikeze izithombe ngaphambi kokunikezwa ukufinyelela kusakhiwo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Snowshill namaphethelo